Published April 16, 2021 at 9:15 PM CDT
Qaar ka mid ah ardayda wax ka barata Dugsiga Sare ee Koonfurta Sioux City ayaa ku casuumay dadweynaha inay kala soo qayb galaan mudaharaad maanta dhacaya. Sida lagu sheegay qoraal la soo dhigay barta Facebook, socodsiinta ayaa loo qorsheeyay 3:30 galabnimo. ka soo horjeedka dugsiga. Boostada ayaa sheegtay in ardayda ay weydiisanayaan xubnaha bulshada inay ka soo qayb galaan.
Laakiin maamulayaasha iskuulka ayaa horay u sheegay in banaan baxa noocaas ah aan la ogoleyn. Toddobaadkii la soo dhaafey, 100 arday ayaa muujiyey inay muujinayaan walaac ku saabsan mas'uuliyiinta iskuulka inay wax ka qabanayaan sinnaanta jinsiyadda, xorriyadda diinta, iyo daaweynta ardayda LGBTQ.
Shaqada dhismaha ee Iowa ayaa kor u kacday markii heer kulka uu kordhay bishii Maarso, taasoo horseedday kororka guud ahaan shaqada gobolka ee bisha.
Gobolka ayaa soo wariyay qiyaastii 1.5 milyan shaqaale shaqaale ah bishii Maarso, illaa 15,000 laga bilaabo Febraayo, sida laga soo xigtay xogta Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha Mareykanka ee la sii daayay Jimcihii. Tan iyo markii shaqada laga joojiyay bilowgii cudurka coronavirus gugii la soo dhaafay, Iowa waxay soo tabisay kororka shaqada 10 ilaa 12 bilood gudahood.
Heerka shaqo la'aanta Iowa, si kastaba ha noqotee, isma beddelin bishii Maarso ee 3.7%, oo la mid ah bishii Febraayo. Iowa iyo Kansas waxay ku xiran yihiin heerka toddobaad ee ugu hooseeya ee shaqo la'aanta gobollada Mareykanka. Deriska Iowa ee Nebraska iyo South Dakota waxay isku aadinayaan Vermont iyo Utah oo ah heerka ugu hooseeya, oo ah 2.9% - taas oo ahayd heerka shaqo la'aanta ee Iowa bishii Febraayo 2020.
Haweeneyda laga soo doorto deegaanka Iowa ee Congress-ka Cindy Axne ayaa sheegtay inay qalbigeeda jabisay markii ay maqashay Gov. Kim Reynolds oo diiday…